Ny vehivavy izay nijanona be fitiavana mba hizara ny zavatra nitranga rehefa avy fahasalaman'ny vehivavy - Ny Lahatsary Amin'ny Chat - Ny Tsara Indrindra!
Ny vehivavy izay nijanona be fitiavana mba hizara ny zavatra nitranga rehefa avy fahasalaman'ny vehivavy
ny tantaram-pitiavana lehibe"ho tonga tamiko ny"fihetsika
Efa ho ny antsasaky ny vehivavy izay nifindra noho ny fitiavana, fa tsy be, araka ny fanadihadiana vaovao
Ao an-trano ny olona, dia nanadihady ny mitady mafy ny fomba maro amin'izy ireo no nifindra toerana noho ny fifandraisana sy ny zava-nitranga avy eo.
Raha ny fandehany fa nampihetsi-po ny zava-dehibe hafa ny olona no mahazatra kokoa noho ny hevitrao. Efa ho iray amin'ny dimy namaly no nitatitra manana fifandraisana sy mampihetsi-po ny fahatelo ireo izay nanao izany mihoatra noho ny indray mandeha.
Ny vehivavy dia nitatitra fa izy ireo dia kely kokoa mba hahatonga ny fandrosoana noho ny lehilahy.
Araka ny fiovana, valo ambin'ny folo isan-jato no nilaza fa ny fiovana dia tsy afaka afa-tsy ny rocky fifandraisana, fito ambin'ny folo isan-jato tia ny toe-javatra vaovao, ary iraika ambin'ny folo lahy isan-jato na dia raiki-pitia amin'ny olona iray hafa.
Rehefa dinihina tokoa, dia ny momba ny fahafantarana izay misy ny soatoavina ireo."Ny hany zavatra izay hahatonga ahy mifindra, izany no fitiavana,"hoy izy,"Loza."Eo amin'ny fiainako, tsy mino aho fa ny asa no antony ampy hifindra toerana iray izay mamaritra ny fifandraisana izay misy ahy. Amin'ny teny hafa, tsy misy henatra, raha te-hifindra ho fitiavana, na miasa na tsy. Dia nifindra tany manerana ny firenena nandritra ny fifandraisana. Niresaka be dia be, mialoha, nandritra, ary taorian'ny mba hahazoana antoka fa ny hifindra fotsiny lahatsoratra vaovao iray hafa, dia toy izany koa niaraka taminy. Izany no tsara, satria afaka taona vitsivitsy taty aoriana dia lasa mpinamana. Fa izaho mbola tia ny Pasifika Avaratra, namana, sns hifindra manerana izao tontolo izao.
Ao anatin'ny efa-bolana.
Nahazo lavitra azy nandritra ny fotoana kelikely.
Ny hany toro-hevitra: tsy hanova ny mpiara-miasa."Izaho sy ny vadiko dia nivady, fa velona ao amin'ny isan-karazany ny Amerikana-tanàna izy rehefa nahazo asa ao Rwanda.
Dia nifindra avy, ary iray volana taty aoriana aho dia nanaraka azy, namela ny nofy asa.
Ny hetsika nitarika ahy mba ho tafiditra ao amin'ny sarimihetsika raharaham-barotra amin'ny fotoana feno, ary na dia tena miahiahy momba ny fahazoana asa, ny zava-drehetra dia tsara kokoa noho andrasana. Dimy taona taty aoriana, aho, ka mbola mihazakazaka ny raharaham-barotra amin'ny fotoana feno. Nanana fianakaviana eto fa tsy fantatro ny momba ny. Soa ihany, ny tsy mampino lavitra fianakaviana nanampy ahy hahazo an-trano rehefa nisaraka izahay. Ny tombony dia ny fifandanjan-kery, raha ny marina mitehina mankany amin'ny mpiara-miasa amin'ny ny lehibe indrindra ara-bola ny fiarovana sy ny fifandraisana ao an-tanàna (fandroana, mino aho). Fa tsy manenina aho mampihetsi-po, tena. Rehefa irery aho indray, tsy maintsy mamboly be dia be ny fahaleovan-tena sy fahamatorana. Nataoko izany, fony aho zanak'osy. Izany dia manome ahy ny mandady na mikisaka ny mieritreritra fa ny zanako nanao izany. Tamin'izany fotoana izany aho dia nifindra avy any Boston ka hatrany Los Angeles miaraka amin'ny olon-tiany. Tsy mbola niaina amim-pifaliana miaraka aminy, fa izy no nanorim-ponenana ahy sy ny vadiko tany Los Angeles, ary rehefa afaka dimy taona aho dia nifindra tany amin'ny tsy misy. Nifindra tamin'ny lehilahy iray, avy amin'ny Pittsburgh-bahoaka sekoly kilasimandry ho Philadelphia. Tsy fantatro fa ny fanahy dia ao Tsy mbola nipetraka tany Philadelphia, na dia nitsidika azy mihoatra noho ny indroa. Tsy manana asa miandry ahy. Rehefa manao jery todika, izany rehetra toy ny mangina ady.
Ny fiandohan'ny taona dia mafy.
Te-hanambady, saingy tsy nanao izany aho, toy izany koa izahay teo amin-dry zareo. Tsy tiako ny mieritreritra momba ny fotoana ity, saingy tany amin'ny farany dia loza izay niara-niasa. Efa nivady nandritra ny taona, ary efa roa ny ankizy. Dia nahazo diplaoma avy amin'ny lisea sy ny enina andro taty aoriana dia nifindra avy Iowa, Colorado, mba ho akaiky ny lehilahy iray nihaona any Meksika tamin'ny lohataona aina. Nilaza ny olona rehetra te-handre fa ny hifindra nanana na inona na inona atao amin'ny zazalahy (anisan'izany ny tenany). Izaho no tsy an'asa, tsy misy fanantenana, tsy misy toerana ho velona, ary ny momba ny enin-jato dolara ao amin'ny paosy.
Nivady izahay sy izy ireo dia manana tsara tarehy iray-taona ny vavy.
Nihaona ny zazalahy amin'ny Yahoo Personals, rehefa tsy nampiasaina mba Mampiaraka an-tserasera, ary dia nifindra avy any Florida mba Raleigh. Isika dia nivady nandritra ny taona, ary efa roa ny ankizy.
Dia nanadino ny milaza fa olon-kafa nahita azy
Tonga saina aho fa izany dia mendrika ny ho nanao vivery ny zavatra izay toa adala ny olon-drehetra. Ankoatra izany, dia mety foana hifindra toerana indray.
Nifindra manerana ny firenena, ka nandao ny asa tiako tokoa ny niaraka tamin'ny vadiko, amin'ny asa miaramila, afaka volana vitsivitsy monja taorian ny fampakaram-bady.
Efa ho iray taona, ary mbola miezaka aho vao hahalala izany, fa efa nianatra zavatra betsaka momba ny tenako sy ny fifandraisana.
Izany isan-taona ny fahazavan-tsaina, ara-barotra, ny fanekena, ny fianarana, sy nihalehibe.
Amiko roa volana taty aoriana, aho satria toa tia azy aho raha dia lavitra loatra ny hahita azy tsy tapaka. Fa nandao ny fotoana ela lasa izao, raha mbola velona eto ary tia azy. Mieritreritra aho fa ny farany aho dia nahazo ny tsara indrindra ny hodi. Nifindra eto amin'ny Pennsylvania, California. Izahay dia miara-dimy ambin'ny folo taona, nanambady sivy, folo taona lasa izay, ary dia nitondra azy ho any Pennsylvanie, koa. Mety hitera-doza, ary rehefa handray izany aho, dia faly aho, tsy nanenina ny amin'izany aho.
Efa nifindra tany Norfolk, Virginia, izay tsy mbola nisy, tao amin'ny fifandraisana izay tena mbola vaovao, fa tena mafy sy henjana.
Nisaraka izahay taorian'ny volana ary nahazo ny trano. Izao aho dia mivarotra izany, telo taona tatỳ aoriana, dia nividy izany, amin'ny fahaverezana goavana. Aho Nanapa-kevitra ny hifindra any Costa Rica mba ho niaraka tamin ny roa-taona olon-tiany.
Hitako izy dia manambady roa herinandro taorian'ny nahatongavako.
Izaho dia monina ao amin'ny Valan-javaboary city, Utah aho, ary naka ny mpizaha tany avy any amin'ny trano fisotroana. Izy nipetraka tany Cleveland, saingy tsy nahafantatra izy fa nitombo tao Indiana.
Dia mikatona ny trano fisotroana ary nandany ny roa taona manaraka amin'ny Skype, Hiatrika ny Fotoana, sy ny fisidinana nanerana ny firenena hatramin'ny izahay tamin'ny fo no tonga, dia nifindra tany Cleveland.
Nivady izahay, dia nianatra ny ho tia Ohio izahay, ary hanan-janaka.
Ary izy no lehibe indrindra ny olona hatramin'izay aho nihaona. Michaela McKenzie dia mpanao gazety mahaleotena misahana manokana ny fahasalamana, kolontsaina sy ny teknolojia, ary tsy mandray anjara amin'ny boky toy ny Fisorohana, ny vehivavy, ny Fahasalamana, ny Endrika, ny Hatsarany, ny Lehilahy ny fahasalamana, Johns Hopkins fahasalamana Review, ary ny olon-kafa. Fahasalaman'ny vehivavy dia mandray anjara amin'ny isan-karazany ny fandaharana affiliate-barotra, izay midika fa azonao atao ny mandray ny lahatsoratra naniraka karama ho an'ny vokatra vidiana amin'ny alalan'ny rohy tranonkala ny mpaninjara.
18 Plus ankizivavy Ho famantarana. Rosiana
Stretnúť Človeka z Kazachstanu na Zoznamka, .
olon-dehibe Mampiaraka toerana ny firaisana ara-nofo mampiaraka ny fiarahana amin'ny chat amin'ny chat roulette zazavavy an-tserasera tsy misy fisoratana anarana Mampiaraka Fiarahana tsy misy sary ny lahatsary amin'ny chat ny taona amin'ny chat roulette amin'ny zazavavy an-tserasera ny lahatsary amin'ny chat Mampiaraka tsy misy fisoratana anarana manaitaitra ny lahatsary amin'ny chat